စနေဂြိုဟ်ရဲ့ ကွင်းတွေ ပျောက်ကွယ်လာနေပြီလား (Are Saturn's Rings Disappearing?) | Myanmar Astronomy
Posted by ခွန်း at 8:04 AM Labels: Astrophysics, solar system, ခွန်း
ကျွန်တော် မသိသေးတဲ့အရာအတွက် လေ့လာရကျိုးနပ်ပါတယ်။ နေကို နှစ် ၃၀မှာ တစ်ပါတ် ပါတ်ပါတယ်ဆိုတာ ဗေဒင်မှာလည်း သုံးပါတယ် ကောဇာအစီးအနင်းပေါ့။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကြယ်တံခွန်အကြောင်း ဖတ်ချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး နေပေါ်က အစက်အပျောက်ကြီးတွေ အကြောင်းလည်း ဖတ်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဗေဒင်နဲ့ ဆက်စပ်နေလို့ပါခင်ဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့ ..။ ကွန့်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ ကို ရန်းဂန်း။ ရေးစရာတွေက များနေတော့ ဘယ်ကစလို့ စရမှန်း မသိ ဖြစ်နေတာပါ။ sun spot အကြောင်းကို နေအကြောင်း ရေးတုန်းက အကျဉ်းချုပ် ရေးပေးဖူးပါတယ်။ ကိုရန်းဂန်း ဖတ်ချင်တယ် ဆိုရင် နည်းနည်း ပြန်ရေးပေးပါ့မယ်ဗျာ။ ကြယ်တံခွန် ကြောင်းလဲ ရေးပေးပါ့မယ်။ လာအားပေးပါဗျာ။
အစ်ကိုရေ... star party ဆိုတာကြီးမရှင်းဘူးဗျ။
star party ဆိုတာ ညမှာ ကြယ်ကြည့်တဲ့ ပွဲတွေကို ပြောတာပါ။ မြန်မာပြည်က နက္ခတ်တာရာကြည့် ဝါသနာ ပါတဲ့သူတွေ လုပ်ကြတာပါ။ သူတို့မှာ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး တယ်လီ စကုပ်တွေ ရှိကြတယ်။ ဈေးကြီး ပေမယ့် ဝါသနာ ပါလွန်းလို့ ဝယ်ထားကြတာတဲ့။ ဟိုတလောကတောင် မြန်မာပြည်က ကိုဘူးသီး ဆိုတာ လရဲ့ မျက်နှာပြင်ပုံကို ရိုက်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်တာ ဆန်ကာတင်ထဲမှာ အရွေးခံထားရတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒီနေရာမှာ နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့ မြန်မာတွေ ရှိနေပါပြီ။
ဟီး.... ဟီး... ဗဟုသုတတွေများစွာ ရပါတယ်အစ်ကိုရေ
မလုပ်နဲ့ ကိုဖားကြီးရေ။ အခုတောင် စနေဂြိုဟ် ကွင်းတွေ ပျောက်တာ ဟိုဂြိုဟ်ကြီး ဝင်လာလို့များလား ဆိုပြီး တွေးပြီး လန့်နေတဲ့ သူတွေ ရှိလို့ ဒီဟာက ဖြစ်နေကျ ကိစ္စပါလို့ ပြောထားရတယ်။ :P
black holes တွေအကြောင်းစိတ်ဝင်စားတယ်အစ်ကိုရ။
အစ်ကို။ဖတ်ချင်လို့ပါ။ ကျေးဇူး ။ :)
ခင်ဗျား နှံ့နှံ့စပ်စပ် ရှိတာ ကောင်းတယ်ဗျ
အဲဒီနယ်ပယ်မှာ အားကိုးရမဲ့သူ တစ်ယောက်နဲ့တူပါတယ်
I appreciate your effort!!
လာကွန့်ပေးတဲ့ သူတွေကို အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ black hole တွေ အကြောင်း engineer4myanmar.com မှာ ကျနော် တင်ပေးဘူးပါတယ်။ အဲမှာ မဖတ်ရသေးတဲ့ သူတွေ များနေရင် ကျနော်ဒီမှာ ပြန်တင်ပေးပါမယ်။
အခုမှဘဲ ရှင်းသွားတော့တယ်.. ဟီး.. အဲဒီ သတင်းစဖတ်လိုက်တုန်းက မျက်လုံးတောင်ပြူးသွားတယ် တချက်...အံ့သြဖို့ ကောင်းတယ်.. တခါမှအဲလို ပျောက်တတ်တယ်လို့ မကြားဖူးဘူးကိုး.. ရေးပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် :)
အဲဒီလင့်ကို ပို့ပေးတဲ့ ညီမလေး ဆုမြတ် ကိုလည်း အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အစ်ကို လဲ အစက မသိဘူး။ အဲလင့်ကို တွေ့မှ သိတာ။